Uvavanyo lweConcept: UPhando nge-Intanethi
Uvavanyo lweConcept 2.0
NgoMvulo, nge-19 kaDisemba ngo-2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UHanna Johnson
Ukwenza uphando kwi-Intanethi yindlela ekhawulezayo, elula yokufikelela kubathengi bakho ukuze bafumane uluvo lwabo ngayo nayiphi na into. Umsebenzi wam e Uphando lweZoomerang kwi-Intanethi kunye neePoll inokundenza ndithande, kodwa ndibethwa ngumoya zizinto ezipholileyo onokuzenza kunye nophando. Kule mihla, uneetoni zokhetho lophando, ukusuka ukuwufaka kwindawo yakho, ukuyithumela ngombhalo kwiifowuni zabantu, ukuyila kwaye uyithumele ngqo kwi-Facebook.
Eyona nto ndiyithandayo kwezi zinto zamandla yenye yezinto zethu ezintsha. Ikuvumela ukuba layisha umfanekiso wobuphi na ububanzi nokuphakama, ukuya kuthi ga kwi-250k kubungakanani befayile, kuvavanyo lwakho. Ngaphandle kweendlela ezimangalisayo onokuzisebenzisa ukwenza olu phando lube luhle, luyigubungele kwilogo yakho, okanye ufumane uluvo lweqela ngezinxibo zomtshakazi, eli nqaku livumela uvavanyo lweengcinga ngendlela engazange ibonwe ngaphambili.
Ukuvavanywa komxholo yinkqubo yokuvavanya impendulo yabathengi kwimveliso, uphawu, okanye umbono ngaphambi kokuba ungeniswe kwimarike. Inika indlela ekhawulezayo nelula yokuphucula imveliso yakho, ichonge iingxaki ezinokubakho okanye iziphene, kwaye uqiniseke ukuba umfanekiso okanye uphawu lwakho lujolise ngokufanelekileyo. Kuya kufuneka ujonge kude kufike kwiNetflix, Qwikster debacle ukuze uqonde ukubaluleka kokucela uluvo lwabathengi bakho phambi kokuba ukwenza izigqibo ezinkulu…
Iisaveyi ezikwi-Intanethi ziyindlela elungileyo yokuvavanya uvavanyo, kwaye ungazisebenzisa ukukhathaza ukudubula kuzo zonke iintlobo zemicimbi. Nazi ezintathu:
Ukuvavanya ilogo: Sonke siyayazi indlela ekubaluleke ngayo ukuba nelogo engalibalekiyo kwaye elungelelaniswe kakuhle negama lakho. Ngaba usazama ukukhetha ilungelo lokuzimela? Nje ukuba uyile ilogo kwaye uyibeke emhlabeni ngokudibeneyo nophawu lwakho, kunokuba yinto engenakwenzeka ukuyitshintsha kwaye uphinde uzenzele igama. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba umilisele uvavanyo lophawu lwelogo ngaphambi kokuzibophelela kwilogo.
Bonisa abathathi bakho bophando ngeendlela ezahlukeneyo zelogo, kwaye ubabuze ukuba zeziphi iimvakalelo kunye neempendulo zelogo. Ngaba iilogo ozikhethileyo zibonisa imishini kunye nexabiso lenkampani yakho? Fumanisa ngaphambi kokuba ukhethe ilogo, hayi emva kwayo.
Ingxelo yentengiso / yengxelo: Shicilela intengiso iya kukuseta ubuyisele ipenny entle, ke ufuna ukuqiniseka ukuba ichithwe kakuhle. Yenza uphando ngemifanekiso yeentengiso ongathanda ukuzisebenzisa, kwaye uzivavanye kubaphulaphuli abahlukeneyo. Fumanisa ukuba intengiso yakho ithini kubo. Zeziphi izichazi abanokuthi bazidibanise negama lakho okanye imveliso esekwe kwintengiso? Ngaba le ntengiso ibenza bazive njani? Ingxelo engakumbi onokuyifumana malunga nentengiso yakho kuphando lwakho, kokukhona kunokwenzeka ukuba intengiso iyakufezekisa injongo yakho.
Ngokufanayo, ukufaka imifanekiso kuvavanyo lwakho olukwi-Intanethi yindlela elungileyo yokuqinisekisa ukuba ikhava yakho iyabandakanyeka kwaye iyasebenza. Ngubani onomdla ngakumbi (kwaye ke ngoko ukwazi ukuqhuba ukuthengisa) kubafundi bakho, uLady Gaga okanye uGeorge Clooney? Ukuqikelela okungalunganga kungathatha irhafu enkulu kumda wakho wenzuzo, ke vavanya umfanekiso wakho wekhava, iintloko kunye neengcinga eziphambili zebali ngaphambi kokuzibophelela.
Ingxelo yoyilo lweWebhusayithi: Ukuhlengahlengisa iwebhusayithi yakho kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo, kwaye kunokuba nzima ukwazi ukuba ngaba utshintsho olwenzayo luyasebenza okanye ngaba lixesha kunye nemosha imali. Ngenisa imifanekiso yoyilo kuvavanyo, kunye nokuvavanywa kokusebenziseka, imiyalezo kunye nokuhamba kuyilo lwakho olutsha. Buza imibuzo efana nale: "Yintoni oyikhumbula kakhulu malunga noyilo osele ulubonile?" "Ucinga ukuba yenza ntoni le nkampani?" "Ungacofa phi ukuze ufunde ngakumbi malunga nokuthenga imveliso?" Ingxelo engaphezulu onokuyifumana malunga noyilo lwakho kuvavanyo lwakho, kokukhona kunokwenzeka ukuba uyilo luya kuzifezekisa iinjongo zakho.
Uvavanyo lwengcinga yeyona ndlela ikhawulezayo, neyona ilula yokuqinisekisa ukuba umfanekiso owusebenzisayo ulungile, nokuba ngowelogo yakho, intengiso, iwebhusayithi, okanye ikhava. Sukuchitha ixesha nemali kwimifanekiso engatsho ukuba ufuna ntoni. Thumela isaveyi yengqiqo kuvavanyo lweengcinga 2.0. Bonke abathengisi abakhaliphileyo bayayenza.
tags: uphando lweengcingaukuvavanywa kwengcingakuvavanyo lomxholosurvey
Iindleko zembali yeefowuni eziphathwayo